Maninona no Mahatonga saina ny ExactTarget sy CoTweet | Martech Zone
Maninona no Mahatsiaro tena ny ExactTarget sy CoTweet
Alarobia, Martsa 3, 2010 Sabotsy 28 Novambra 2015 Douglas Karr
Tamin'ny voalohany somary taitra tamin'ny vaovao aho, ExactTarget sy CoTweet? Email sy Twitter? Toa zanak'olo-mpiray tam-po amiko izy ireo, tsy azoko tsara.
Anio hariva aho dia niresaka tamin'i Chris Baggott, mpiara-manorina ny ExactTarget ary ankehitriny CEO ny Compendium Blogware. Tsy afaka nilaza zavatra lehibe momba ny hetsika i Chris, faly be tamin'i Scott Dorsey… ary nanazava ny tena dikan'izany:
Ny email sy ny Twitter dia tsy mitovy amin'ny iray hafa. Izy ireo dia samy fomba fampifandraisana sy fomba fampitaovana.
CoTweet dia rafi-pitantanana orinasa ho an'ny Twitter, ExactTarget dia sehatry ny marketing amin'ny mailaka orinasa. Ireo orinasa izay nahasarika ny tsirairay dia samy manantena ny tsirairay avy.
CoTweet ary ny Laboratoara media sosialy manome Silikatsaka Orinasa Valley miaraka amin'ny fahitana an'i Silicon Valley.
CoTweet dia mamela ny ExactTarget milentika ao amin'ny haino aman-jery sosialy tsy misy risika na fandaniana lehibe amin'ny fividianana iray amin'ireo rindranasa sosialy hafa any.
Fomba tsara hanatsofohan'ny ExactTarget ny rantsan-tongony ao anaty media sosialy. Mety hisy ny hiady hevitra fa ny mailaka no tambajotra sosialy voalohany… Tsy afaka miady hevitra amin'izany aho. Manantena ny hahita ny zava-mitranga manaraka miaraka amin'ny ExactTarget aho ary faly manokana fa ny CoTweet dia miorim-paka ao Indianapolis! Faly koa aho fa tsy haverina havoaka ExactTweet izany! 🙂
Faly be koa aho ho an'i Scott Dorsey! Scott no resadresaka nifanaovako tao amin'ny ExactTarget tamin'ny andro taloha - ary tsy namoy ny fitiavany sy ny hafanam-pony ary ny fientanam-pony ho an'ny orinasa izy. Tsy isalasalana fa ity dia toko voalohany fotsiny amin'ny maro ho avy! Miarahaba anao ExactTarget sy CoTweet!
Tags: cotweetprectargetscott dorsey
Media sy fitantanana fanoherana
Famoahana sy fikarohana amin'ny fotoana tena izy
Mar 4, 2010 amin'ny 11: 40 AM
Fanadihadiana mahaliana, Doug. Ahoana ny fahitanao ny ET mahazo vola amin'ny CoTweet?
Mar 4, 2010 ao amin'ny 6: PM PM
Ny indostrian'ny mailaka, araka ny fantatrao dia niova kely nandritra ny roa taona lasa. Ianareo olona dia iray amin'ireo mahatsapa fa tsy te-hanampy tolotra hafa ny mpivarotra - te hampihena ny serivisin'izy ireo izy ireo ary hanatsotra ny paikadin'izy ireo. Manipy fantsona vaovao amin'izy ireo hatrany izahay - ary izany dia mila automatique bebe kokoa, ary fitaovana mora kokoa.
Heveriko fa tsy dia ny momba ny ExactTarget hahazo vola bebe kokoa noho ny fiarovana ny vola azony ankehitriny. Misy ny fotoana ahafahana manao automatique sy mamolavola dashboard fifandraisana ho an'ireo mpivarotra hikirakira ny fifandraisana ivelany sy alàlana mifototra amin'ny alàlana. Raha tsy mivoatra ny ExactTarget dia tsy haharitra ny fitomboany. Dingana iray mankany amin'io lalana io.
Mar 9, 2010 amin'ny 8: 42 AM
Nanaiky. Nantsoinay an-kalalahana ihany koa ny fiarahamonina teknolojia manodidina azy hoe "Silicon Prairie." 🙂
Ny fisamborana CoTweet dia manaitaitra tokoa ary raha vantany vao tafaraka ny teknolojia, dia hahita zavatra tsy azon'ny olon-kafa atolotra amin'ny resaka serasera ifanakalozana isika.